Ihe mmetụta igwefoto 108 MP nke Samsung bụ onye ọrụ | Androidsis
ISOCELL Brigth HMX: nke a bụ ihe mmetụta 108 megapixel amarịrị sitere na Samsung
More megapixels anyị na-ahụ na igwefoto igwefoto ọhụụ na ekwentị ndị ọhụrụ na-enye. Ndị na-agba egbe 48 MP sitere na Samsung na Sony bụ ndị na-enye mkpebi kachasị elu, ma ọ bụ mee, kama, ebe ọ bụ na 64 MP si Samsung nara ha ocheeze ha na Mee nke afọ a. Agbanyeghị, nke a ka dọpụrụ ọnọdụ ahụ dịka ike kachasị ike, ma ọ bụ n'ihi ọhụrụ 108 MP foto mmetụta si Samsung onwe kere na mmekota na Xiaomi, nke emere ka ọ bụrụ ọkwa na nso nso a.
Ụlọ ọrụ ISOCELL Brigth HMX bụ aha mkpọsa ọkwa ụlọ ọrụ South Korea na nso nso a. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ijide foto nke mkpebi ahụ, mana ọ na-abịa na ikike a na-ahụtụbeghị na igwefoto ekwentị ọ bụla ọzọ.
Ihe niile gbasara ihe mmetụta 108 MP nke Samsung
Samsung bụ 108MP ISOCELL Brigth HMX bụ aha igwefoto ekwentị ọhụụ gosipụtara ụnyaahụ. Ọ na-etu ọnụ a 0,8 micrometer size maka pikselụ gị, nke mere na mgbe ejikọtara iji teknụzụ Quad Bayer (4-in-1) ma ọ bụ karịa akpọrọ teknụzụ Pixel binning Tetracell, enwere ike nweta ihe osise 27 megapixel nwere oke nkọ.
Anya elekere bụ 1 / 1,33 inch, nke na-eme ka ọ dị ka nke kasị ukwuu. Ọ ka ga-ahụ etu ndị nrụpụta ekwentị na-etinye ya n'usoro foto nke ọdụm ha ka ọ ghara ime ka ihe ndị a ghara ịmalite nke ọma.
Mkpebi nke foto igwefoto na-enye ruru ihe ruru 12.032 x 9.024 pikselụ. N'ezie anyị ga-eche foto ndị gafere 20 MP n'ibu n'ụzọ buru ibu, ọ bụ ezie na a ga-enwe mgbanwe dị iche iche nke ga-ebelata mkpebi nke foto ndị a ga-ewelata ịdị arọ nke ukwuu na nsonaazụ ikpeazụ.
N'aka nke ọzọ, ihe mmetụta ọhụụ na-akwado ndekọ vidiyo 6K (6,016 x 3,384 pikselụ) ọhụụ na-enweghị atụ na okpokoro 30 kwa nkeji. Ọzọkwa, atụmatụ dị mma akpọrọ Smart ISO dị maka igwefoto; nke a, site na algorithm ya, na-ezere mkpọtụ na foto gbara ọchịchịrị ma nweta ndị ọzọ pụtara ìhè site na imeziwanye saturation nke pikselụ, yana ịhazi ọkwa nke amplifier uru dabere na ihe ọkụ dị na ebe ahụ. Na mgbakwunye, teknụzụ Super-PD ọ na-eji nkwa iji nye usoro dị oke ọsọ na ọnọdụ ọ bụla.
Samsung bụ okpueze dịka onye kacha ere ahịa na Europe
Mass Production nke lens ga-amalite n’ọnwa a, ma amaghi mgbe anyi ga ahu ISOCELL Brigth HMX na ngwa, ma obu nke. Otú ọ dị, a na-atụ anya na Xiaomi Mi MIX 4 ga-ebu ụzọ buru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ISOCELL Brigth HMX: nke a bụ ihe mmetụta 108 megapixel amarịrị sitere na Samsung
TomTop kachasị mma na ngwa ngwa ama
Facebook na-arụ ọrụ na iwebata ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ngwa gam akporo ya